Ngowuphi umqondiso weZodiac ongoyena Mqabuli ubalaseleyo, kwaye ngubani oyena umbi? - Ukuvumisa Ngeenkwenkwezi
Ngowuphi umqondiso weZodiac ongoyena Mqabuli ubalaseleyo, kwaye ngubani oyena umbi?
Sijonge indlela uphawu ngalunye lwezodiac oluphuma ngayo kwaye sibeke udidi lwazo ukusuka kokulungileyo ukuya kokubi! Pucker up kwaye ufumanise ukuba ngubani oyena mntu uncamisayo.
Ngaba ukhe wanethuba 'lokuvavanya' amaqabane amaninzi okuncamisa kwiminyaka embalwa edlulileyo? Okanye mhlawumbi uye wathembeka kwimilebe efanayo iminyaka ... Nantoni na ibali lakho, xa kuziwa kwi-puckering up, kukho isitayela sokwanelisa wonke umntu! Abanye bathanda i-smooches enomdla ngakumbi, ngelixa abanye bephupha ngokuhlala ixesha elide. Sibeke imiqondiso yezodiac ukusuka kweyona kisser ilungileyo ukuya kweyona imbi, ke umbuzo ngulo; ngubani ofuna ukuziqhelanisa okongeziweyo ukuqinisekisa ukuba banike iqabane labo amabhabhathane? Fumana apho ubeka khona umgangatho wethu!
A kiss uthetha amazwi amawaka kwaye ngokwenene Thetha ngokubanzi ngeemvakalelo zakho ngomntu othile. Amandla epeki abukhali kangangokuba angade aveze nokuba awunayo ikhemistri elungileyo ngokwemigaqo ukuhambelana kwe-horoscope . Ngaphezu koko, inokuxela kwangaphambili ukuba uya kuba noqhagamshelo lombane kwigumbi lokulala. Ngaba sithi, okanye kuyatshisa apha?!
Yeyiphi imiqondiso yezodiac eyenza abantu abancamisayo abakhulu kwaye abazenzi?
Ukwenza ngaphandle yindlela entle yokusondeza wena kunye neqabane lakho kwaye xa uyenziwe ngokugqibeleleyo, inokusinika amabhabhathane abukhali. Nangona kunjalo, kwicala le-flip, akukho nto imbi ngaphezu kwamathe amaninzi kunye nokuqhwaba kwamazinyo kuyo yonke indawo ... Ewe, sonke sikhona.
- Ngaba ukhe uwabone amanani amadijithi amathathu? Funda wethuAmanani eNgelosiisikhokelo. -
Fumana ukuba uthando lusemoyeni ngoncedo lwePsychic!
Iipisces yeyona kisser ilungileyo kuzo zonke
Inomdla kwaye ibukhali, iiPisces zinjalo emangalisayo xa kuziwa ekwenzeni kwaye ngokuqinisekileyo akukho mntu wasemzini kwi-French kiss ethembekileyo. Aba bantu bayakuthanda ukuncamisa kwaye ngokwenene babeka iintliziyo kunye nemiphefumlo yabo kuyo yonke i-peck encinci. I-Pisces ngokuqinisekileyo inayo into efunekayo ukwenza intloko yakho ijikeleze ngexesha lokumanga okungapheliyo.
Njengabalinganiswa abanesibindi nabanesondo, i-Scorpios iyazi kakuhle into emayiyenze ukuba ukuncamisa kukhumbuleke kwaye kube ngumlingo. Umlingiswa wabo ozenzekelayo wongeza kuphela ulonwabo lokumanga kunye. Lo mqondiso awunazintloni zokuvakalisa iimvakalelo zabo ngokuncamisa okunexabiso eliphezulu, kwaye usithembe; awuyi kukwazi ukufumana okwaneleyo kwi-smooches yabo.
I-Taurus inika i-smooches yenyama
Nangona iTaurus isenokungabi yeyona miqondiso yezodiac, xa bethanda umntu abangoyiki ukwenza iimvakalelo zabo zaziwe kwaye abayi kuphinda bayeke. engena ngenxa yokuncamisa okubulalayo. Ngomnye weTaurus 'ukwanga okumnandi awusoze ufune ukuba iphele kwaye ukhumbule umzuzu entlokweni yakho iiveki.
Umhlaza zincamisa sweet
Umhlaza ngabantu abathanda ngokwendalo, kwaye indlela yabo yokuncamisa ayifani. Nangona banokungazithembi, xa kuziwa ekwenzeni iCancer yinto engaphezulu kokuzithemba. I-Cancer kissing specialty ibandakanya besebenzisa izandla zabo kwaye baxhakamfule inkanuko yesini lonto iya kuphambanisa iqabane labo.
Abemi bomthonyama bama-Aries ngabantu abanomdla wokutshayela
Ngokwenyani kubuntu babo, abantu bakwa-Aries banomdla kwaye banesibindi xa kufikwa kwi-smooching. Ezi abantu bayayithanda iPDA kwaye xa bethanda umntu abayi kulungela ukujikeleza ixesha elide ngaphambi kokungena kwimanga yomlingo kunye nokukhunjulwa. Ukwanga okuvela kwi-Aries ngokwenene kuya kukuthumela ezulwini lesixhenxe!
IiLeos zishushu ezincamisayo
Xa uLeo ekwanga, izinto zihamba ukusuka kwi-0 ukuya kwi-100 ngokukhawuleza kwaye iqondo lobushushu liyenyuka ukuya kwindawo yokubila. Kushushu apha? Ukwanga kukaLeo kuya kukukhokelela ekubeni ufune ukukrazula iimpahla zomnye ngokukhawuleza kwaye uzalisekise iminqweno yakho yasendle. Kubo, ukuncamisa kukuseka unxibelelwano nomntu kunye nokwenza iimvakalelo zabo zaziwe.
IiVirgos zicinga kakhulu ngesenzo
IiVirgos zinokuba ngabancami abalungileyo, kodwa bakholisa ukucinga kakhulu ngezinto ezinokubakho rhoqo jika iimeko ezinokuba nesexy kunye nenkanuko yenyama zibe zezobunzima. Aba bantu bahlalutya kakhulu kwaye banobunzima bokuphila okwangoku kwaye banandipha izinto nje. Virgo, ngenxa yobuchule bokwanga obukhunjulwayo, kufuneka uphumle kwaye uvumele izinto zenzeke ngokwemvelo.
Abantu baseLibra ziinkosi zokwenyani xa kufikwa kumdlalo wokuhenda kwaye ngokwenene banayo into efunekayo ukwenza nabani na abawele. Oko kuthethwa iiLibras kunokuba kakhulu ukonqena xa kufikwa ekufumaneni uthando kwaye batyekele ukuhlala phantsi bavumele abanye abantu benze umsebenzi. Bangongeza umtsalane wothando ekuqabuleni kwabo xa benokukhathazeka, oko kukuthi.
I-Aquarius 'intle kakhulu'
Abantu base-Aquarius banegama lokuba nobubele kunye nolwazelelelo, oluguqulela kwindlela yokumanga. Bahlala benobunzima bokuyeka izithintelo zabo kwaye bonwabele iiseshini zabo zokuzenzela. Nangona, xa u-Aquarius ehlisa udonga lwabo kwaye eqala ukuziva ekhululekile baba ziingcali zokuncamisana.
Abantu beSagittarius bazibambe
Abantu beSagittarius bathanda ukugcina izinto zidlala kwaye ziyonwabisa, yiyo loo nto bezibamba ekubekeni iintliziyo zabo kunye nemiphefumlo yabo kwi-smooches yabo. Nangona zabo ukwanga kusenokungabi namandla kunye neemvakalelo ezikrwada, I-Sagittarius iyayazi indlela yokubonisa umntu ixesha elihle.
IiGemini zoyika kakhulu
Nangona abantu beGemini benomdla kakhulu kwaye banxibelelana kakhulu; inyaniso kukuba, ukuncamisa nokuthetha ngeemvakalelo zabo asiyonto yabo ngokwenene. AmaGemini ayakuthanda ukuba nexesha elimnandi kwaye anokufumana ixhala elincinci xa ubudlelwane buqhubeka, yiyo loo nto ukwanga kwabo ngamanye amaxesha akubi nabuganga.
I-Capricorn ineyona ndlela imbi kakhulu
Abantu beCapricorn banepragmatic kakhulu kwaye abanakunceda kodwa bahlalutye yonke into enxulumene nothando kunye nokuthandana. IiCapricorns ziyasokola ukuba zizenzekele kwaye nangona ukuncamisa kwabo kubi, banokudibana njengoko kuhleliwe kwaye kumiselwe. Ukuncamisa kwabo kuswele umlingo omncinci wokubenza bakhumbuleke ngokwenene.
Ezi zezona miqondiso ye-6 ye-Zodiac yokuthetha kakhulu